Yangon Universities Central Library - Yangon Thu Michelle Video
Yangon Universities Central Library
Places and landmarks, Video Jun 08, 2018
ဒီတစ်ခါတော့ ရန်ကုန်သူမီရှဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာက လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုစာကြည့်တိုက် (Yangon Universities Central Library) ပါ။ ၁၉၆၄ မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကို တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုက်အဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိပါတယ်။ ရည်ညွှန်း၊ ကိုးကားဖို့ စာအုပ်၊ ပေပုရပိုက် အစုုလင်ဆုံးစာကြည့်တိုက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ရည်ညွှန်းစာအုပ် ပေပုရပိုက်တွေရဲ့ အရေးပါမှုကို ကိုယ်တိုင်စာအုပ်တွေရှာဖို့လိုမှ သိလာတာပါ။ အင်တာနက်မှာရှာလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရာအားလုုံးက အင်တာနက်ပေါ်မရှိပါဘူး။
သေချာမှုလည်းမရှိသလို အရင်းအမြစ်လည်း ရှာရခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာကြည့်တိုက်မှာ ရှာတာ ပိုသေချာပါတယ်။
ငယ်ငယ်က မြန်မာစာကို အထင်မကြီးတာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိခင်ဘာသာစကားကို ထပ်တတ် ထပ်သိလို့ကော ဘာထူးမှာလဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ပြီး အင်္ဂလိပ်–မြန်မာ ဘာသာပြန်တော့မှ ချွေးပြန်တာ။ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းကြွယ်ဝဖို့၊ ခံစားချက် သဘာဝတရားကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ ပေါ်လွင်ဖို့၊ အရေးအသားပြေပြစ်ဖို့ အတွက် မြန်မာစာ မတတ်ရင် လိုရင်းကို မရောက်နိုင်တာ။ အဲ့ဒီတော့မှ မြန်မာစာတန်ဖိုးကို နားလည်တယ်။ နောက်ပြီး တခြားနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင်စာပေ/ဘာသာစကားက ခိုင်မာမှုမရှိ အလေးထားရကောင်းမှန်းမသိရင် သူများတွေက ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို သူတို့အပိုင်လုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ပျောက်ပျက်သွားတာမှ ခံသာသေးတယ်။ အဲ့ဒီခံစားချက်ကို သူများနိုင်ငံမှာ ဧည့်သည်သွားလုပ်မှ သိလိမ့်မယ်။
တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုစာကြည့်တိုက်က အခုဆိုပြုပြင်မွမ်းမံထားလို့ စာကြည့်တိုက်မှာရှိနေရတာကိုက သက်တောင့်သက်သာနဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်နေပါပြီ။ ပေပုရပိုက် အစုံအလင်နဲ့ ရတနာသိုက်လိုပဲ။ စာအုပ်ငှားမယ်ဆိုရင်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ၊ ဆရာ/ဆရာမတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းကိုပဲ ပေးငှားပါတယ်။ အပြင်လူကျတော့ လာထိုင်ဖတ်လို့ပဲရတယ်။ စာဖတ်ချိန်ကတော့ မနက်ကိုးနာရီကနေ လေးနာရီအထိပေမဲ့ စာအုပ်ငှားချိန်ကတော့ မနက်ကိုးခွဲကနေ သုံးနာရီအထိ စာအုပ်ငှားပေးပါတယ်။
တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုက်မှာ ဌာနစိတ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ www.uclmyanmar.org ကနေကြည့်လို့ရတယ်။
မီရှဲအကြိုက်ဆုံးကတော့ အရင်ခေတ်ကမဂ္ဂဇင်းတွေပဲ။ မဂ္ဂဇင်းတွေက ခေတ်ရဲ့အနေအထားကို ပေါ်လွှင်စေတဲ့စာပေတစ်မျိုးပါ။ စိတ်အပန်းပြေဖို့၊ ခေတ်စားနေတဲ့အရာတွေသိဖို့၊ သုတ ရသ စာ နဲ့ အလှအပရေးရာတွေအတွက် တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က မဂ္ဂဇင်းဖတ်လို့ ဖက်ရှင်နဲ့ ကျန်းမာရေးအသိရခဲ့တယ်ပြောရမှာပဲ။ လစဉ်ထွက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းအသစ်ကစျေးကြီးတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်က မဂ္ဂဇင်းတွေကို အုပ် ၂၀/၃၀ လောက် စာအုပ်အငှားဆိုင်က အဟောင်းတွေ အမြဲဝယ်ပေးတယ်။ မဖတ်ရသေးရင် အသစ်ပဲလေ။ ကြိုက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေကို အတွဲလိုက်စုထားတယ်။ အင်္ကျီပုံလှလှလေးတွေ့ရင် ဖြတ်ပြီးသိမ်းထားတယ်။ ဆရာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ သေချာရှင်းပြပေးတဲ့ Ma Yin Win Htike နဲ့ စာကြည့်တိုက်တခွင် မြေအောက်ခန်းထိ ရိုက်ကူးခွင့်ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်များဗဟိုုစာကြည့်တိုက်က တာဝန်ရှိလူကြီးများနဲ့ ဆရာမဒေါ်တင်ဝင်းရည်တို့ကိုလည်း အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Yangon Universities Central Library is located in Yangon University alongside of Yangon University Library. In this library you can find archive of magazines, journals, novels and books for related area. Too bad you can’t lend unless you areauniversity student or employee of university. But you can still read there. The highlight and precious possession is Yandanarpone Newspaper which released in Kongboung Dynasty. Also series of ThuRiYa Newspaper 1911. Havealook!